Onukwube Alex Alfred Anedo (Onyeisi Oche)
Rev. Bro. Charles Ogbuchukwu Okeke
Enyinnia Samuel Ikokwu
Friday Ifeanyichukwu Ogbuehi
Deacon Ndubuisi Ogbonna Ahamefula B. A. Linguistics M. A. Linguistics,
Ejirimara ndị Igbo na ụzọ A ga-esi A Kwalite Ejirimara ndị a
Ngozi E. Charles-Owuamanam Sukulu Nke Jenaraal Sutọdisi Alvan Ikoku Feduraal Koleji Nke Edukeshọn, Owere. 08034127477.
Ejirimara dịka ịkowa ya, bụ akparamagwa dị iche iche nke a na -ahụpụta n’ime ndụ mmadụ ma ọ bụ obodo . Mmadụ ọbụla ma ọ bụ obodo ọbụla nwere ihe dị iche iche e ji ama ya. A bịa n’ala Igbo, okwu a bụ Igbo nwere nghọta ato. Nke mbụ, ọ na-egosi ebe obibi nke a na-akpọ ala Igbo. Nke abụọ, ọ na-egosi ndị bi ya bụ ebe nke a na-akpọ ndị Igbo. Nke atọ, ọ na-egosi olu okwu nke a na-akpọ asụsụ Igbo. A bịa n’asụsụ, asụsụ Igbo bụ asụsụ juputara n’olu dị iche iche. Olu ndị a niile bụ otu n’ụdị otu asụsụ mana ha nwere otu ha si akpọ ihe aha na otu ụda asụsụ ha dị , dịka Igbo Ọnịcha , Igbo Owere , Igbo Ikwere , Igbo Bendel nakwa Igbo ndị ọzọ. Ejirimara ndị Igbo bụ omenaala na ọdịnaala ha nke asụsụ bụ otu n’ime ha.
Eji m aka na ọtụtụ ndị Igbo anyị taa maara nke ọma na site na afọ ise nke na-abịa abịa dịka otu onye mba Amerika kwuru sị, asụsụ (ejirimara) Igbo ga-abụ ihe e chefuru echefu. Ihe kpatara otu a bụ ihe anyị ga-eleba anya n’akwụkwọ a. Ọzọ kwa, akwụkwọ a ga-elebe anya n’ụzọ di iche iche a ga-esi kwalite ejirimara ndị Igbo. Ọtụtụ ụmụaka, ndị okorobịa nta na agbọghọbịa nta nke ndị Igbo bụzị ndị jiri omenaala ndị ọzọ mere omenaala nke ha taa. A na-ahụ akparamagwa nke a tumadị ebe asụsụ ha nọ , ebe ha jiziri asụsụ bekee merezịa asụsụ Igbo ha. Eji m oghere n’ekele mmadụ niile tinyere aka n’icheputa ihe odide gbasara ụzọ a ga-esi akwalite ejirimara ndị Igbo ma dekwa ya n’Igbo ebe onye ji aka ya bụ onye ọkammụta dị elu bụ Dọkịta Oriakụ Lucy Apakama n’ụlọ akwụkwọ a di elu bụ Alvan Ikoku Feduraal Koleji nke Edukeshon, Owere. N’ịkọ ya dịka akụkọ na ụbọchị Dọkịta Oriakụ Apakama na-agwa otu onye nọ ebe mụ onwe m nọ na ọ chọrọ ka onye ahụ soro tinye aka n’ihe odide nke a ga-eji kwalite asụsụ Igbo n’obodo anyị, anụpere m ihe ọ gwara onye ahụ werekwa gwa ya sị na achọkwara m isoro ha wee dee ya bụ akwụkwọ. Mgbe onye mụ na ya nọ n’otu sukulu bụ Jenaraal Sutodisi nke Alvan nụrụ ihe m gwara Dọkịta a, o tiri mkpu ma chịkwa ọchị sị m n’ụdị ajụjụ: “Bịa ị ga-edeli Igbo?” Na nzaghachi , azara m ya sị: “eee , aga m edeli Igbo”. Ihe m ji akọ akụkọ a n’ akwụkwọ a bụ na ọtụtụ ndị Igbo atụfuola ejirimara ha. O bụ ihe mgbanwuju anya ebe ọtụtụ ụmụ afọ Igbo nọ na mmadụ pụrụ ide asụsụ Igbo nke ọma ebe ọ na-abụghi ihe onye ahụ gụrụ na mmahadum bụ oke ihe ndakwasị na nsogbụ nke anyị nwere n’ala Igbo taa . Eji m aka n’akwụkwọ a na ọ bụ mberede ka a na-eji ama dike. Onye ọzọ m ga-ekelekwa n’akwụkwọ a bụ Emmanuel Abamara onye deputara akụkọ ngụpụta nke Orienti Redio n’ụbọchị ọnwa Jenuwarị n’afọ nde abụọ na iri na asaa nke kọrọ otu asụsụ Igbo ga-esi bụrụ ihe e chefuru echefu ma ọ bụrụ na o nweghi ihe ndị Igbo na gọọmenti ga- eme maka ya ugbu a. Onye dere akụkọ a kọwapụtarakwa na ụmụntakịrị ndị ọta akara na ndị pramarị bụ ndị e kwesịrị ime ka asụsụ Igbo sie ike ebe ha no site n’ime ka ha na asuu ya ma n’edekwa ya n’ihi ogologo nke ndụ ha foduru n’ime uwa a iji chekwaa ejirimara ndị Igbo .
Amara m nke ọma na ihe odide nke akwụkwọ a bụ ihe bịara na nnukwute oge iji chetakwara ndị Igbo ejirimara ha na ijikwe chọpụtakwa ụzọ dị iche a ga-esi kwalite ejirimara ndị a .
Ka anyị lebaa anya n’ọtụtụ ejirimara ndị Igbo nke bụ ihe omenaala na ọdịnaala nke ala ha . Omenaala dịka C.C. Ekwealor (1998:29) deputara n’ akwụkwọ ya ihe o bụ dịka Ogbalu (1981) siri kowaa ya bụ : “ ihe anyị na-eme , otu anyị si adị ndụ , ihe anyị na-eri na ihe anyị na-etinye n’ahụ na otu anyị si eji ejiji , ihe e jiri mara anyị dịka mba , abụ anyị na-abụ , egwu anyị na-ete , omume na agwa anyị na-akpa .” Ejirimara Omenaala Igbo dị ọtụtụ. Akwụkwọ a ga-eduputa ya naani ndeputa ghara ịkọwa ha n’otu n’otu maka obere oghere akwụkwọ a . Ejirimara ndị igbo dịka omenaala ya si dị bụ ihe ndị a .
iwa oji B. idu isi CH. Ịlụ nwaanyị D. ịhụ eze E. ịgụ aha F.ili ozu. G. ichi echiche GB. Ịgba mgba GH. Ịgba afa GW. Iri Ji N. ịchụ afọ H. ịbọ ụzọ I. ịwa akwa I. egwu nwa J. ịhụ nwata eze K. ejima KP. Iru mgbede KW. Mmemme ntoputa L. abamaba ọgbọ M. ịgọ ọfọ ma ọ bụ ịkwọ aka ụtụtụ N. ekele na nsọpụrụ na ndụ ndị Igbo NW. ịtụ nzu NY. Ịzụlite nwa n’ala Igbo O. ibi ugwu O. ịzụ ahịa nwa P. ọmụgwọ R. ịkwa ala S. nkwenye n’ịha mmiri SH. nkwenye n’osu, ume na diala T. nkwenye n’ọmụ nkwu na igbu nkwu U. nkwenye n’ụmụada U. igbu ichi V. ịgba mmọnwụ W. Ike ekpe Y. ịzụ ahịa Z. ịgba alụkwaghịm na ọtụtụ omenaala ndị ọzọ dị n’ala Igbo.
A bịa n’ejirimara agụmagụ ọdịnaala dịka E.N. Emenajo na ndị ọzọ (1985:11) siri deputa ya n’akwụkwọ nke ha bụ :
Echiche ndị nna nna anyị , ndị mbụ na ndị egede, gbasara ihe ha maara ma ọ bụ ihe ha nụrụ n’akụkọ ma ọ bụ hụ n’anya. Ha jiri okwu ọnụ nkịtị gosi echiche ahụ n’ụdị akụkọ ma ọ bụ n’ụdị abụ ma ọ bụ n’ụdị egwuruegwu…ihe kpatara e ji akpọ ha agụmagụ ọdịnaala bụ maka na e deghi ha ede n’oge ndị mbụ ahụ …ọ pụtaghị na e dee ha ugbu a, ha bụrụzie agụmagụ ugbu a .Mba! E dee agụmagụ ọdịnaala ugbu a, ihe ọ bụzi bụ agụmagụ ọdịnaala e dere ede.
Site na nkọwa Emenajo na ndị soro ya deputa ejirimara agụmagụ ọdịnaala , anyị na-enwe nghọta na e ji agụmagụ ọdịnaala akuziri ụmụaka Igbo Omenaala , asụsụ na ihe ndị ha tosiri ịmata n’ala Igbo dịka mmegbụ mmadụ , anụghị nti na ndụmọdụ , igbu mmadụ na njọ ndị ọzọ bụcha ihe adịghị mma na ndụ ndị Igbo . A na-ejikwa agụmagụ ọdịnaala akọro ụmụaka Igbo ka ihe ụfọdụ siri malite n’ụwa . A na-ejikwa ya enwe obi ụtọ site n’akụkọ ifo na-ejikwe ya eme ka nwatakịrị na-ebe akwa kwụsị akwa ma rahụ kwa ụra site n’abụ nke a na-abụrụ ya .
Ka anyị leeba anya n’ejirimara ụfọdụ agụmagụ ọdịnaala ndị a site n’ikwo ha ntakịrị. Agụmagụ ọdịnaala ndị a bụ: Akụkọ Ifo , Abụ , Ilu , Egwuregwu ma ọ bụ ejije , Agwụgwa ma ọ bụ Okwu ntabi ire , Akụkọ Okike , Akụkọ ndịichie nakwa Agụmagụ ọdịnaala ndị ọzọ n’ala Igbo .
1.Akụkọ Ifo : A bịa na akụkọ ifo , e nwere ihe mmụta nke pụrụ iche a chọrọ ka nwata ọbụla nke na-ege ntị mụta . ọtụtụ oge akụkọ ifo nke a na-akọrọ ụmụntakịrị na abụkarị ihe gbasara ndụmọdụ nke ndị okenye chọrọ ka ha mụta na ndụ ha nke a ga-esi n’ime ha kwalite ma ọ bụ chekwa obodo anyị n’ụzọ ezi omume na kwa ihe ndị ọzọ dị mma . Ihe ọmụmatụ dị n’ime akụkọ ifo n’ebe ihe mụta ya dị bụ ihe ndị a :
Aghụghọ adịghị mma. 2. Inwe ndidi bara oke uru 3. Mmegbụ adịghị mma. 4. Omume ọma na-eso omume ọma. 5. Mkpụrụ mmadụ kụrụ ka ọ na-aghọta.
Guo “Mbediogu” nke Maazị F. C. Ogbalu dere. ọtụtụ akụkọ ifo ka i ga-ahụ n’ime akwụkwọ a .
Abụ: A bịa n’abụ, ọtụtụ ihe ka a na-eji abụ eme. E nwere abụ e ji eku nwatakịrị ka o nwe ike ịrahụ ụra mgbe ọ na-ebe akwa. E nwere abụ e ji arụ ọrụ nke a na-abụ iji mee ka ike gharị ịgwụ onye na -arụ ọrụ ọsọ ọsọ. E nwere abụ agha nke a na-eji aga agha iji mee ka nfu obi ma ọ bụ mmeri diri n’agha ahụ. E nwere abụ nke a na-eji akpọla nwa agbọghọ na be di ya nke na-egosipụta obiụtọ. E nwerekwara abụ ọmụgwọ nke a na-abụ ebe nwaanyị mụrụ nwa nọ iji ṅụrịa. Abụ ndị a juputara n’asụsụ Igbo bụ ihe ndị na-akwalite ọdịnaala na omenaala Igbo nke bụkwa ejirimara ndị Igbo. Ka anyị lebatụ anya n’ụfọdụ abụ ndị a.
Abụ Nke Iku Nwa
Onye mụrụ nwa na-ebe akwa Egbe mụrụ nwa na-ebe akwa Wete ụzịza wete ose Wete agbangolo ofe Ka ụmụ nnụnụ rachaa aka Okpuofufu kugbo ha Ugbu o, egwu mụrụ abịa.
Onye gbuwe achara onye gbuwe Onye akpọla ibe ya onye ikoni.
Ọgụgụ Okwukwe Agha emeela Enyi mba, enyi Agha ebiela Enyi mba, enyi Ndị iro agwụla Enyi mba, enyi I zogburu anụ ukwu Enyi mba, enyi Nke i zogburu bute, Enyi mba, enyi Ka e kwee gị n’aka Enyi mba, enyi ` Ọ ga-adị mma nke ukwuu na nwa afọ Igbo chọpụtara ọtụtụ abụ ndị ọzọ nke e jiri mara ndị Igbo .
Ilu : A mara ilu dịka mmanụ ndị Igbo ji eri okwu . A na-ekwu n’asụsụ Igbo sị onye a tụụrụ ilu ma kọwaara ya , ego e ji lụọ nne ya furu efu . Ilu bụ otu n’ime ọdịnaala na omenaala Igbo nke a na-eji agwa nwa afọ Igbo okwu iji mee ka o chee ezi echiche ma werekwa ezi echiche ahụ mere ezi ihe . Ilu ka ndị okenye ji ekwu okwu n’ụzọ ngọrịngọ . Ajụjụ i tosiri ịjụ onwe gị dịka nwa afọ Igbo bụ : olee ihe mmụta dị n’ilu a ? . I cheba echiche n’ilu nke a tụụrụ gị , ị pụrụ ịchọpụta ihe ilu ahụ na-akuzi. Ka anyị leba anya n’ilu ụfọdụ ndị a na nkuzi ha .
Ilu Nkuzi ma ọ bụ ihe o gosirsi
A naghị asọ mgbagbụ eje agha Obi isi ike 2. Anya lehie ogwu osisi akpọbie ụkwụ Ileru anya n’ala 3. Nwaanyị olu ọma di anaghị ajụrụ ya nri Obi umeala 4. Nkapị kwuru sị “onye fụrụ opi m fụrụ ma ọnụ akapụghị ya Ntachi obi 5. Onye isi nkwọcha etosighi ije ọgụ e ji osisi alụ Ikpakọ uche 6. Oke nọ n’ụlọ gwara nke nọ n’ọhịa Mkpughe na azụ dị na ngịga 7. Igwe bụ ike Mmeko 8.Oke amala ụma ata akpa dibịa dibịa amala ụma ebo oke ohi Ikpe ziri ezi 9.Dibịa ghara ịkpata akụ ya akpata ụzọ ihe ọma abụo anaghị agbanahụ afọ ojuju mmadụ n’otu mgbe 10.Ihe dị ọkụ anaghị anogịde n’ire Ọ dịghị mma ibubata ọgbahara n’ebe udo dị
4.Egwuregwu ma ọ bụ Ejije : Nke a bụ ọdịnaala Igbo ụmụaka ji egwukọrịta egwu . Ka anyị leeba anya na ụfọdụ egwuregwu ndị a .
Onye Na-ekwu Ọzịza
Kpakpankoro Kpankoro Kpakpankoro Kpankoro Udu m o Ogele Udu m o Ogele Onye ọ mara Su ya ya ya, suyaaa
Oro Oro Oro Oro Oro Oro Onye m jidere Jide Ọpọ n’isi Ọkpọ Abịa mụ o Bịawa o
Onye na-akọ ede Ede mara mma ọkụkọ Onye na-akọ ede Ede mara mma ọkụkọ Ngozi na-akọ ede Ede mara mma ọkụkọ Emeka na-akọ ede Ede mara mma ọkụkọ
Eje m ịwọ ọkwụrụ Ịwọmịrịwọ ịwọ ọkwụrụ ịwọ Ọkwụrụ eju ekete Ịwọmịrịwọ ịwọ ọkwụrụ ịwọ Onye ga-ebu? Ịwọmịrịwọ ịwọ ọkwụrụ ịwọ Chika ga-ebu Ịwọmịrịwọ ịwọ ọkwụrụ ịwọ
Agwụgwa na Okwu ntabi ire: Nke a bụkwa agụmagụ ọdịnaala ọzọ ụmụaka kwesịrị ịdị na-eme iji kwalite asụsụ na Omenaala Igbo. Ọ na-ewetakwa obiụtọ ebe ụmụaka na-eme ya nọ. Agwụgwa ma ọ bụ gwa m gwa m gwa m bụ ajụjụ ndị a na aju nke onye a juru ya ga-eche echiche tupu o zaa ya . Okwu ntabi ire bụ okwu nke ụmụaka n’ekwu oso oso . Ka anyị leeba anya na ọmụmatụ ha.
1 Gwa m gwa m gwa m ọgaranya ukwu aja? Awọ
2 Gwa m ihe na-adụ nwata ọdụ n’ihu nne ya? Agbịsị
3 Gwa m ihe na-eche gị mgba n’ezi nna gị? Apiti ma ọ bụ Atuturu
4 Gwa m ihe na-acha zaa n’ikpa? Ji awara awa ma ọ bụ ogbe ụgụ
Ọmụmaatụ okwu ntabi ire.
1.Ukochukwu Okechukwu kwuru okwu chukwu n’ụlọ chukwu dị na Arọchukwu 2.Nwata na-egbụ achara, ọ bụ aka ka achara nkọ ka ọ bụ achara ka aka nkọ? 3.Nwaanyị bụ oru ele, i na-eri olu ele eri ka i na-ere olu ele ere? 4. Manye aka n’akpa akakpọ, chịrị akụ n’akpa akakpọ taa.
Ụzọ Dị Iche Iche E Ji Akwalite Ejirimara Ndị Igbo
1.Ime ka ndị nne na nna ịmata oke mkpa di na ikuziri umu ha asụsụ Igbo na Omenaala Igbo . Nke a bụ ihe mbụ ekwesịrị ime na ezi na ụlọ iji mee ka asụsụ Igbo na omenaala Igbo kwusie ike n’obodo anyị bụ Naijiria na Afrika nakwa ụwa dum. Ndị nne na nna kwesịrị iweputa oge ha kọọrọ ụmụ ha ọtụtụ akụkọ ọdịnaala nke dịka akụkọ ifo, abụ, ejije nakwa ihe ndị ọzọ dị n’akụkọ ọdịnaala nke ndị Igbo .
ụlọ akwụkwọ nke ndị ọta akara, pramarị, sekọndịri na mahadum site na njikọ aka ngalaba ndị na-elokọta ha kwesịrị ime ka asụsụ Igbo, agụmagụ ọdịnaala na kwa Omenaala Igbo bụrụ ihe ndị a na-akuzi n’ụlọ akwụkwọ ndị a n’otu n’otu.
Goọmenti kwesịrị ihu na nwata akwụkwọ ọbụla n’ụlọ akwụkwọ ọbụla nke na emeghi ọfụma n’ asụsụ Igbo ma ọ bụ agụmagụ ọdịnaala na Omenaala Igbo agahi agafe na ogbe akwụkwọ nke ọzọ rue mgbe o mere ọfụma na ihe nle nle nke agụmagụ ọdịnaala ma ọ bụ asụsụ Igbo. Goọmenti kwesịrị ịhụ na ụmụ akwụkwọ ndị nke na-eme ọfụma n’ule asụsụ Igbo ma ọ bụ agụmagụ ọdịnaala Igbo kwesịrị inwe ihe nrita nke Goọmenti na-enye ha. Ọzọ kwa, Goọmenti kwesịrị ka ọ na-akwụ ndị nkuzi niile tụmadị nde nke gụrụ Igbo ma na-akụzikwa ya ezigbo ụgwọ nke ga-eme ka ha nwe ezi mkpalite n’ikuziri ụmụ akwụkwọ Igbo ihe ọfụma tụmadị agụmagụ ọdịnaala na omenaala Igbo nke ala ha. E kwesịrị ka a na-ele ndị nkuzi, ndị nne na nna nakwa nwa afọ Igbo ọ bụla ule n’Igbo tupu ha nwe ihe nweta ọ bụla nke ha na-atu anya n’aka Goọmenti ma ọ bụ ngalaba ndị ọzọ. Goọmenti ma ọ bụ ngalaba dị iche iche kwesịrị ịdị na-eme ihe mmeme nke ịsọ mpi nke onye bịara onye nke mbụ na ihe odide n’asụsụ Igbo.
4.Nwa afọ Igbo kwesịrị ka o jekwuru onye okenye ọ bụla tụmadị ndị nke nọ n’ebe ụlọ ha iji nụta ma mụtakwa ọtụtụ ihe banyere ọdịnaala na Omenaala Igbo.
Ndị na-ezisa ozi na ihe omume ndị ọzọ site na ihe onyonyo, redio na ihe nzisa ndị ọzọ kwesịrị ịdị na-ezisa ihe ọdịnaala na omenaala Igbo ọtụtụ mgbe.
Nwa afọ Igbo ọ bụla kwesịrị ịdị na-ekwu okwu n’asụsụ ya ma na-emekwa akparamagwa nke e jirimara ndị Igbo nke di na ọdịnaala na omenaala ya.
Na nchịkọta, ejirimara ndị Igbo bụ ihe nke di na asụsụ, ọdịnaala na omenaala ha. O bụ ejirimara ndị a ka akwụkwọ a lebara anya hụpụtakwa na ala Igbo na ndị Igbo nwere ọtụtụ ejirimara ha nke dị na omenaala na ọdịnaala ha. Akwụkwọ a chọpụtarakwa na ndị Igbo ejighicha asụsụ ha na omenaala ha kpọrọ ihe ebe ha tufuru asụsụ ha ma were asụsụ bekee mere asụsụ nke mbụ ha. Ọ dị oke mkpa na akwụkwọ a lebara anya n’ụzọ dị iche iche a ga-esi akwalite ejirimara ndị Igbo nke dị n’asụsụ, omenaala na ọdịnaala ha site n’ihe Goọmenti, nne na nna, ndị nkuzi na nwa afọ Igbo ọ bụla kwesịrị ime iji kwalite asụsụ Igbo, ọdịnaala na omenaala Igbo.
Ekwealor, C.C. (1998). Omenaala na Ewumewu Igbo. Onitsha: Africana First Publishers Plc. Emenajo, E.N. Okolie, O.O. na Ekwe, B.U. (1985). Igbo maka Sinio Sekondịri 1. Ibadan: University Press Limited.
Ǹchụaja: Emume Ngafe Ụmụ Okorobịa
Udeh, Evangeline Nkem Ngalaba Lingwistik, Igbo na Asụsụ Naịjirịa ndị ọzọ Mahadum Naịjirịa, Nsụka
Omenaala bụ ka ndị si ebi ndụ ha. Emume ngafe bụ otu n’ime omenaala ndị Igbo nwere. Ọ bụ emume na-egosi na mmadụ esitela n’otu ọgbọ baa n’ọgbọ ọzọ. Ọ dị otu a na mba ụwa niile gbaa gburugburu. Ma n’obodo ndị ọcha ma n’obodo ndị isi ọjii. Emume ngafe a na-egosi na mmadụ apụtala n’ịbụ nwatakịrị banya/gafee na ntorobịa. Ha na-ebido mgbe ahụ kpachapubara onwe ha anya n’ihe ọ bụla ha na-eme. Ha na-emezi otu masiri ha, ha na-ekwenye na ha nwere ike nke aka ha. ụmụ nwoke na-abanye otu dị iche iche iji gosi na ha etozuola. A bịa na mpaghara ọbụla, e nwere otu ihe ndị di iche ha na-emegasi iji wee banye kpamkpam n’ịbụ nwoke dịka ịba mmanwụ, ịwa akwa, ịgba mgba, ịgbụ ichi, wdg. N’aka nke ọzọ, ụmụ nwaanyị na-emekwa otu ihe ahụ n’ụdị nke ha. Iru mgbede bụ ihe a na-emere nwa agbọghọbịa ọbụla tozurula ogo ilu dị. Ma n’ebe ụfọdụ ọ na-abụkarị emume a na-emere nwa agbọghọbịa lụrụ dị ọhụrụ. Emume a na-abụ iji kwadọọ ya bụ nwa agbọghọ maka agwa ọma ma ọ laa na be di ya, otu ọ ga na-esi akpaso di ya agwa dị mma ka obi na-adị ya mma. Ha na-abanyekwa n’ọkwa ịbụ nne. Ndị nwoke abanye n’ọkwa ịbụ nna. ọtụtụ kewara emume ngafe n’ụzọ dị iche iche. ụfọdụ si na ọ bụ, mgbe a mụrụ mmadụ, na mgbe mmadụ nwụrụ. N’oge dị ugbu a, ihe ndị dị otu ahụ na-anyuzị ka ọkụ. ụfọdụ anaghịkwa eme emume ọbụla iji wee mee ka ụmụ ha mata onye ha na ha bụ ebiri. ọ na-emekwa ka ọgannihu obodo na-aga n’ihu. ọ na-akwalite omenaala ndị ọbụla. ọ bụ ihe ụfọdụ ndị a bụ mkpa ọ dị ịhụ na a kwalitere omenaala ndị dị otu a maka na ọ na-enye aka ikpọkọta ọha obodo ọnụ.
Emume ngabiga bụ emume e ji egosi na e sila n’otu ọgbọ banye na nke ọzọ. ọ na ewelite mmụọ ndị na-etolite etolite elu iji wee mata na ha etoola. ọ na-ewelita ọkwa ha n’anya ọhaneeze. Emume ngafe a gbasara aka ma bụrụkwa nke a na-ahụ na mba ụwa gbaa gburugburu. ọchụchụ aja ọtụtụ mba n’ọwụwa anyanwu ala anyi na-adị ka emume ngafe a. A na-ahụta ịchụ aja dịka ihe e ji egosi ngafe site n’otu ọgbọ wee banye n’ọgbọ ọzọ. Na-ahụkwa ya dị ka ihe mmepe anya nakwa ikikere inwe ezi mmekọrịta n’ebe ọhanaeze nọ. Emume ịchụ aja ahụ na-egosi na onye ahụ esiterela n’ibụ ụmụaka banye n’uju n’ịbụ onye tozuru ihe e ji mmadụ eme n’obodo.
Emume a bụ emume na-eme ka mmadụ nwee ọnụ okwu n’obodo ya nakwa n’ihu ọhanaeze. Ndị ụmụnna ya na-edeba aha ya n’ụtụ obodo iji wee gosi na o tozuola ihe e ji mmadụ eme. onye ahụ na-amata ihe omimi dị n’obodo ya nakwa nke di n’ofufe a na-efe n’obodo ha. Ịchụ aja a bụ ihe ziri ezi ma burukwa ihe dịịrị onye ahụ n’ebe obodo ya dị. Otu aka na ụkwụ mmadụ siri dị mkpa n’ahụ ya, otu ahụ ka emume ngafe na emume ịchụ aja siri dị mkpa na mba ọbụla. ọ na-egosi mmadụ ahụ na o toruola inyere obodo ya aka ma ihe nche obodo, ma ịgbata egwu, ịme ka obodo na-ekpo ọkụ, inyere ndi ọbọdọ aka ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ụfọdụ nakwa ihe ndị ọzọ.
Oka mmụta Ampin Manụ gosipụta ụzọ ise pụtara ihe n’emume ngafe a: emume ọmụmụ, emume ibanye na ntorobịa, emume alụmdi na nwunye, emume ịbụ agadị nakwa emume ịlakwuru ndị nna nna ochie. Mmemme ngafe a na-eme ka mmadụ mata onye ọ bụ, ihe ọ ga-emenwu, ọkwa ọ nọ n’ihu/n’anya ọhaneze, ihe ọ ga-ahụ nakwa ihe ọ ga na-ahụ n’ime ụwa a nakwa na ndụ ya. A na-enwekwa onye ndubanye. ọ bụ onye a na-enye aka idubanye ndi niile ruru ọgọ ibanye n’ọgbọ ntorobịa. ọ na-akwado ha maka emume ahụ. Mgbe ọ na-eme nke a, ọ na-eme ha ka ha mata ihe ndị kwesiri ịmata gbasara ọgbọ ha na-abanye. Ihe ha ga-ekwu, ihe ha ga-eme egwu ha ga-agba, nkwa ha ga-ekwe w.d.g. ọ na-emepekwa ha anya n’ihe gbasra omenaala na ọdịbendị ha.
Van Gennel na (free encyclopedia 2015) kewara mmemme ngafe a ụzọ ato. Ha bu; Emume nkewa, nnabata na nchịkọta. O ji ihe gbasara ụlọ wee kọwaa emume ngafe. O kwuru na emume a na abụ mmadụ isite n’ọnụ ụzọ nke a banye n’ọnụ ụzọ nke ọzọ. ọ gara n’ihu kwuo na ọ bụrụ na mmadụ etoo, na o na-akwapụta ngwongwọ ya site n’ụlọ nne ya banye n’ime ụlọ nke ya iji gosi na ya etoola okorobịa ma ọ bụ agbohọbịa.
O kwukwara na onye ọ bụla ga-enwerịrị ihe ndị a, ịtụwa ime na ibu afọ ime, ịmụ nwa, nnabata n’otu, ịkwadobe mmadu maka alumdị ma ọ bụ nwunye, alụmdị na nwunye, inwụ na ikwa ozu. Emume ngafe a n’anya n’ndị ụka n’ụzọ ọmụmụ nwa gụnyere: ọmụmụ nwa, ime mmiri chukwu, ngụcha akwụkwọ, agbamakwụkwọ, ịbanye n’ọnọdụ nne na nna, ọnwụ. Jane Collings, Catherine Wernick na ndị ọzọ n’aka nke ha hụtara mmemme ngafe dịka: ọmụmụ nwa, ọmụgwọ, mmirichukwu, mpụta/ngụpụta agbamakwukwọ, mkwusi ịmụ nwa na onwụ.
Ọnọdụ Emume Ngafe na mba Afrika ụfọdụ
Emume/mmemme ngafe bụ mụmemme gbasara ọkaakaa n’omenaala mba ụwa gbaa gburugburu.
Ndị Hamar nke dị na mba Afrịka ji imafe elu ehi egosipụta na nwoke eruola ihe e ji nwoke eme na mpaghara ha.
N’ebe a, ndị Hamar na-eme emume a, site n’igbara ọtọ n’ihu ọha obodo gaa n’elu ọtụtụ ehi iji wee mezu ihe a chọrọ n’aka ha.
George Jacinta na Julia W. Buckery (2013) n’akwụkwọ Jọnal amụmanụ ọmụmụ nwa kọwara na ụdị emume ngafe a gosiri na ịtụ ime na ịmụ nwa ka e ji egosi/amata onye ruru ogo ịbụ nne. Nke a na-emekwa na mba dị iche iche.
Ndị ọkịpa na-amata onye bụ odogwu nakwa onye tozụrụ ihe e ji nwoke eme site n’ụdị abamaba dị iche iche ha na-aba iji mata onye ga-abụ dịka n’agha. Ndị ga na-akata obi lụchitere mba ha ọgụ ma o gbajụọ dọrọ. E ji ya mata ndị okorobịa ndị Madan ndị tozuru ogo ibu ndị agha. Emume a bụ emume George Gtlin hụgoro onye aka ebe mgbe ọ bịara gbaara anya ya ekeresimesi na mbọ ahụ.
Ndị Okịpịa na-akpochi ndị nke n’otu ụlọ ebe ha ga-anọ nweta ọzụzụ kwesiri ekwesi ma die ihe iche aka mgba niile ndị ga-abịara ha. Nke na-enyere onye ahụ aka itozu etozu na ndụ ya.
Ndị nke a ji ikechi anya atụba ndị ọgbọ ahu na mmiri. ọ bụ ebe ahụ ka ihe e kere ya n’anya ga-anọ wee toghee.
Mmemme Ngafe n’obodo anyị bụ Naịjirịa
Naịjirịa dịka mba ndị ọzọ na-emekwa emume a. ọtụtụ agbụrụ ruru ihe dika nari agbụrụ abụọ na iri ise na-esonyekwa na mmemme ndị ahụ dịka omenaala nke ha sịrị dị. ọ bụghị otu n’agbụrụ niile ndị a.
Ha na-emekwa emume ndị a iji gosị na ha etozuta ihe e ji nwoke eme. E nwekwara mmemme a na-emere ụmụ agbọghọbịa na mpaghara ụfọdụ iji wee kwadobe ha maka ịba n’ọnọdụ ịbụ nne. A na-akpọ ya ịrụ mgbede.
ụmụ nwoke na-aka nke ha, nwekwara ihe e ji amata na ha eloruola ihe e ji nwoke eme.
N’agbụrụ ndị Fụlani, onye ha na-ahụta dịka ome ka agụ bụ onye a pịara ọtụtụ olu ụtarị. Onye ahụ agaghi egosi na ihe a na-apịa ya na-ahụ ya ụfụ, ọ gaghị eti mkpi, ọ gaghị ebe akwa nke ọ ga na-egosi na ọ nọ n’ihe ụfụ nakwa ihe ndị ọzọ. O mee nke a, a gaghị ahụta ya ka onye tozuru etozu, onye bụ dịke na dị mkpa. ọ gaghị esonye na ndị a ga-agụnye ka ndị ruru ogo ịlụ nwaanyị.
E ji ya egosi onye bụ dịke, onye ga-enwere ezinaụlọ ya ndịdị, onye ga na-anagide ihe ufọdụ. N’ihi na e ji idike ọrụ, ịkata obi, inwe ezi agwa, na isike wee mara ndị Fụlanị na-achị ehi.
Na mpaghara Yoroba, a na-ahụta nwa okorobịa nwere ọtụtụ ugbo ọ kọrọ ihe ma na-eletakwa ya anya, nwekwaa abọ nkwụ, na ihe ndị ọzọ ka onye tozuru etozu ma rukwaa ogo ịlụ nwaanyị. N’ihi na nkwenye ha bụ na ọ ga-elerunwu ezinaụlọ ya anya, zụnwuo ndị ezinaụlọ ya nri ma na-enwere ha ndịdị.
N’ala Igbo n’oge ochie, ịgba mgba bụ ihe ukwu. ọ bụ site n’igba mgba ka ndị mmadụ ji amata onye bụ dịke n’obodo, nke bụ onye azụ ya anaghị eru ala. Onye dị otu a ka ndị obodo na-enyekarị ugwu na nsọpụrụ. Ha na-akpọkwa ya agụ nwoke ma bụrụkwa onye ndị obodo ji eme ọnụ. ọ bụkwa ya na-alụkarị ndị ada eze n’oge ahụ. E ji ya egosi nwoke zuru oke, okorobia ume na ndụ dị n’ime. ọ na-abụkarị ndị dị otu a na-anọchite anya ndị obodo ahụ ma n’ụlọ ma n’ezi.
Na mpaghara Steeti Anambra, n’ala Igbo ahụ kwa, e jikwa Igbu ichi amata odogwu. Ichi bụ egbugbu ndị nwoke n’ala Igbo na-egbu n’ihu ha. Ndị na-egbu ichi ahụ karicha bụ ndị Ụmụdiọka. N’oge ochie, nwoke tozuru dịmkpa wee ghara igbu ichi na-adị ka ụdara chara nke ọma danyere n’ikpo nsị. Onye ọbụla gburu ichi n’ala Igbo na-enwe ugwu na nsọpụrụ pụrụ iche. Nwoke egbughị ichi n’oge ahụ anaghị enwe ọnụ okwu n’ebe ohaneeze gbakọtara ọnụ. ọ bụghị mmadụ niile na-akata obi eme ya n’ihi na ọ bụghị mmadụ niile ga-edi ụfụ ichi na-afụ. O zughi ala Igbo niile ọnụ. N’obodo ụfọdụ naanị ndị lụrụ nwaanyị na-egbu ichi. Ma a bịa n’obodo ụfọdụ, okorobịa na-egbu ichi tupu ọ lụọ nwaanyị.
Na mpaghara ọbụla, ndị na-aba otu nzuzo na-eme ya iji wee gosi ọtụtụ ihe. ụfọdụ na-eme ya iji wee gosi na ha etozuola ihe e ji nwoke eme dịka ndị otu mmọnwụ. Nwa okorobịa tọpụtara n’oge ahụ aghaghị ịba mmọnwụ. N’ihi ọ bụ ebe ahụ ka ha si amụta izochi ihe ụfọdụ ma ọ bụ ikwa ire ha nga.
E kwenyekwara na ọ bụ ụmụaka na ụmụ nwaanyị na-ekwukarị ihe niile ha hụrụ mana nwoke bara otu ndị a agaghị na-ekwu ihe niile ọ hụrụ, ọ kachasi ihe ndị e kwesiri izo ezo. N’ebe ụfọdụ n’ala Igbo, ụmụ okorobịa na-aba mmọnwụ tupu a kpọọ ha okorobịa tozuru etozu. Nke, a na-egosi nwoke nwere ọnụ okwu nke aka ya ma n’anya ndị ọgbọ ya ma n’anya ọhaneeze maọbụ n’obodo ya. A na-akpọ nwoke ahụ nwoke zuru ihe e ji nwoke eme.
Na mpaghara ala Igbo ụfọdụ ọ kachasi na Steeti Imo/Abịa. ụmụ nwoke na-eme emume iwa akwa. Nke a bụ ihe ga-egosi na ha etozuola ihe e ji nwoke eme ma rukwa ogo ilu nwaanyị. Ma ụmụ okorobịa ụfọdụ na-alụcha nwaanyị tupu ha emee emume a.
N’agbụrụ ndị mgbago ugwu ala anyị, ụmụ okorobia topụtara n’ugwu Awụsa na-ebi ugwu mgbe ha tozuru okorobịa. ha na-eme nke a iji gosi na ha abanyere n’ọgbọ tozuru etozu. Mgbe ọ bụla nke a mere, ha na-eru ogo ịlụ nwaanyị ebe ụfọdụ na-alụ nwaanyị tupu ha ebie ugwu.
Emume a abụghị otu n’ala anyị gbaa gburugburu ma na ndị ọbụla nwere emume nke ha ji egosi ngafe site n’otu ọgbọ wee ruo n’ọgbọ ọzọ n’ihi na Igbo na-asụ n’olu n’olu ma a kwaa ukwara ọ bụrụ otu. Otu ahụ ka ọ dikwa n’agbụrụ ndị ọzọ n’ala anyị.
Mkpa Ọ dị Ịkwalite Mmemme Ngafe a
Ndị obodo na-esite na ya amata onye ga-abụ onye ndụ obodo ahụ n’odiniihu. A na-enwe nkwenye na onye ndụ ga-abụ onye kara obi, onye dị ike, onye nwere akọ n’uche, onye agaghị na-aghọgbu ndị nke ya.
O na-eme ka mmadụ nwee ọnụ okwu n’obodo ya ma ọ bụ n’ihu ọhaneeze. Ha na-enwe nkwenye na onye mere ihe ndị ọgbọ na-eme etozuola ihe e ji mmadụ eme.
Ihe mgbu ndi ahụ ha na-agabiga mgbe a na-eme ndubanya, dịka; iti ihe, Igbu ichi, igba mgba, iba mmanwụ nakwa ndị ọzọ na-enye aka ikwadebe ha maka ihe ha ga-ahụ na ndụ ha.
ọ na-emekwa ha ka ha bụrụ ndị ga na-enwere ndị ezinaụlọ ha ndidi. Mgbe mmadụ diri ihe ufu n’ihi ihe ọ na-achọ, ọ ka ga-enwekwa ndidi maka ndị ọ fụrụ n’anya.
ọ na-eme ka ha ghara ikwu ihe niile ha hụrụ n’obodo ha nakwa na ndụ ha.
E jikwa ya amata onye ga-abụ onye nnọchite anya ndị obodo, ọ kachasị ma e nwee ozi mkparị bịara ndị obodo ahụ.
E ji ya amata ndị bụ dike, ome ka agụ, dịmgba, diji, dinta, ndị agha ndị obodo ahụ maọbụ n’anya ọhaneeze.
Emume ngafe ahụ na-ejikọta ndị niile mere ya bụ emume ọnụ. ọ na-emekwa ka ha na-ejikọ aka ọnụ emekọ ihe n’obodo ha maka na ha ga na-ahụta onwe ha ka nwanne.
ọ na-eme ha ndị tozuru etozu n’anya ndị ọgbọ ha, n’anya ndị obodo, n’anya ọhaneeze nakwa n’anya ndị ezinaụlọ ha.
ọ na-enye ha ohere ịmata ndị ọgbọ ha, mara ndị tọrọ ha na ndị ha tọrọ.
Ndị nọ n’ótù òtù na-emekarị ihe ọnụ dị ka ụmụnne.
ọ na-akwalite omenaala na odibendị. N’ihi na ọ na-eme ka omenaala ghara ịnwụ anwụ.
ọ na-enye obi ụtọ n’obodo na-emekwa ka obodo na-ekpo ọkụ.
Na nchịkọta, Emume ngabiga/ngafe bụ omenaala odibendị. ọ na-arụ ọrụ dị ka ihe e ji akwalite ọdịnaala ma ọ bụ omenaala ndị. Mba ọbụla ma ọ bụ obodo ọbụla na-eme ha na-enwe nnukwu ugwu na nsọpụrụ. ọ na-enyekwa mba ndị ahụ obi ụtọ.
Emume a na-agbasa aha mba ọbụla na-eme ya dịka ndi mba ofesi ụfọdụ na-emekwa ya nakwa mba Afrika ndị na-eme ya. N’ihi na e si na ya enweta mmụta mana-abawanyekwa amamiihe anyị.
Mba, B.M. et el (2013). Igbo Adị: Igbo-English, English Igbo Dictionary of Linguistics and Literal terms.
Peter Prevos (2001). Initiation and Rite of Passage.
Free Encylopedia (2013).
Society for Promoting Igbo Languages and Culture; Okaasusu Igbo: Igbo Metalanguage